နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသံရုံးမှ ကျင်းပသည့် K-Wind Soul Beat ကိုရီးယားရိုးရာ အနုပညာဖျော်ဖြေပွဲသို့ တက်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေး | NLD
Home State Counsellor နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသံရုံးမှ ကျင်းပသည့် K-Wind Soul Beat ကိုရီးယားရိုးရာ အနုပညာဖျော်ဖြေပွဲသို့ တက်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေး
Posted By: mygate wayon: နိုဝငျဘာ 28, 2018 In: State Counsellor, State Counsellor Gallery, State Counsellor NewsNo Comments
နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၂၇
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယနေ့ ည ၇နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာန-၂ (MICC-2) ၌ ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ နှစ်(၇ဝ)ပြည့် လွတ်လပ်ရေးနေ့ နှင့် ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်တွင် ကျရောက်မည့် ကိုရီးယား-အာဆီယံ ဆွေးနွေးဖက် ဆက်ဆံရေးနှစ် (၃ဝ) ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသံရုံးမှ ကျင်းပသည့် K-Wind Soul Beat ကိုရီးယားရိုးရာ အနုပညာဖျော်ဖြေပွဲသို့ တက်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးသည်။
ဖျော်ဖြေပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများနှင့်၎င်းတို့၏ဇနီးများ၊ နေပြည်တော်ကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့်ဇနီး၊ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးများ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး နှင့် သံရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဝန်ကြီးဌာနများမှ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများနှင့် ပြည်သူများ တက်ရောက်ကြည့်ရူ အားပေးကြသည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် ည ၆ နာရီ ၅၅ မိနစ်တွင် ဖျော်ဖြေပွဲကျင်းပမည့် မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာန-၂ သို့ရောက်ရှိလာရာ ကိုရီးယားသံအမတ်ကြီးနှင့် ဇနီးတို့က ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ပြီး မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံရိုက်သည်။
ဖျော်ဖြေပွဲတွင် ကိုရီးယားသံအမတ်ကြီး H.E. Mr.Lee Sang-hwa က နှုတ်ခွန်းဆက် စကားပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ၊ နေပြည်တော် ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကိုရီးယားသံအမတ်ကြီးနှင့်ဇနီးတို့သည် မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံရိုက်ကြသည်။
ယင်းနောက် ကိုရီးယားအနုပညာရှင်များက ကိုရီးယားရိုးရာ အနုပညာအဆို၊ အက၊ အတီးတို့ ဖြင့် ဖျော်ဖြေကြသည်။
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ကိုရီးယားသမ်မတနိုငျငံသံရုံးမှ ကငျြးပသညျ့ K-Wind Soul Beat ကိုရီးယားရိုးရာ အနုပညာဖြျောဖွပှေဲသို့ တကျရောကျကွညျ့ရှုအားပေး
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျသညျ ယနေ့ ည ၇ နာရီတှငျ နပွေညျတျောရှိ မွနျမာအပွညျပွညျဆိုငျရာကှနျဗငျးရှငျးဗဟိုဌာန-၂ (MICC-2) ၌ ပွညျထောငျစု သမ်မတမွနျမာနိုငျငံတျော၏ နှဈ(၇ဝ)ပွညျ့ လှတျလပျရေးနေ့ နှငျ့ ၂ဝ၁၉ ခုနှဈတှငျ ကရြောကျမညျ့ ကိုရီးယား-အာဆီယံ ဆှေးနှေးဖကျ ဆကျဆံရေးနှဈ (၃ဝ) ပွညျ့ အထိမျးအမှတျအဖွဈ မွနျမာ နိုငျငံဆိုငျရာ ကိုရီးယားသမ်မတနိုငျငံသံရုံးမှ ကငျြးပသညျ့ K-Wind Soul Beat ကိုရီးယားရိုးရာ အနုပညာဖြျောဖွပှေဲသို့ တကျရောကျကွညျ့ရှုအားပေးသညျ။
ဖြျောဖွပှေဲသို့ ပွညျထောငျစုဝနျကွီးမြားနှငျ့၎င်းငျးတို့၏ဇနီးမြား၊ နပွေညျတျောကောငျစီ ဥက်ကဋ်ဌ နှငျ့ဇနီး၊ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား၊ ဒုတိယဝနျကွီးမြား၊ လှတျတျောကိုယျစားလှယျမြား၊ ဌာနဆိုငျရာ အကွီးအကဲမြား၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ကိုရီးယားသမ်မတနိုငျငံသံအမတျကွီး နှငျ့ သံရုံးမှ တာဝနျရှိသူမြား၊ ဝနျကွီးဌာနမြားမှ အရာထမျး၊ အမှုထမျးမြားနှငျ့ ပွညျသူမြား တကျရောကျကွညျ့ရူ အားပေးကွသညျ။
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျသညျ ည ၆ နာရီ ၅၅ မိနဈတှငျ ဖြျောဖွပှေဲကငျြးပမညျ့ မွနျမာအပွညျပွညျဆိုငျရာကှနျဗငျးရှငျးဗဟိုဌာန-၂ သို့ရောကျရှိလာရာ ကိုရီးယားသံအမတျကွီးနှငျ့ ဇနီးတို့က ခငျမငျရငျးနှီးစှာ ကွိုဆိုနှုတျဆကျပွီး မှတျတမျးတငျဓာတျပုံရိုကျသညျ။
ဖြျောဖွပှေဲတှငျ ကိုရီးယားသံအမတျကွီး H.E. Mr.Lee Sang-hwa က နှုတျခှနျးဆကျ စကားပွောကွားသညျ။
ယငျးနောကျ နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ၊ ပွညျထောငျစုဝနျကွီးမြား၊ နပွေညျတျော ကောငျစီဥက်ကဋ်ဌနှငျ့ ကိုရီးယားသံအမတျကွီးနှငျ့ဇနီးတို့သညျ မှတျတမျးတငျဓာတျပုံရိုကျကွသညျ။
ယငျးနောကျ ကိုရီးယားအနုပညာရှငျမြားက ကိုရီးယားရိုးရာ အနုပညာအဆို၊ အက၊ အတီးတို့ ဖွငျ့ ဖြျောဖွကွေသညျ။